မန်ယူအသင်းက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ပယ်လီစ္စထရီဆိုတာ ဘယ်သူလဲ…? – MySport Myanmar
မန်ယူအသင်းက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ပယ်လီစ္စထရီဆိုတာ ဘယ်သူလဲ…?
ယနေ့မနက် အစောပိုင်းမှာတော့ ဥရောပရဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ရာသီ နွေအပြောင်းအရွှေ့ဟာ တရားဝင် ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ ဘောလုံးရာသီ တစ်ခုကြောင့် အသင်းတွေဟာ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေကို အပြောင်းအရွှေ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်းခါနီးမှ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး အေးဂျင့်တွေ ၊ သတင်းမီဒီယာတွေ အတွက် အတော်ကို အလုပ်ရှုပ်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ရာသီ တစ်ခုပါပဲ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ ဥရုဂွေးကလပ် ပီရာဆိုးလ်အသင်း ကနေ မန်ယူအသင်းက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဥရုဂွေး လူငယ် ကြယ်ပွင့် ပယ်လီစ္စထရီရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြ ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပီရာဆိုးလ်အသင်း ကနေ မန်ယူအသင်းထံကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၉သန်း ဝန်းကျင်နဲ့ ရွှေ့ပြောင်း လာခဲ့တဲ့ အသက် ၁၈နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဥရုဂွေး လူငယ် ကစားသမား ပယ်လီစ္စထရီဟာ ညာတောင်ပံ နေရာမှာ ကစားသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မန်ယူအသင်းထံကို ယခုနှစ်မှသာ ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ပယ်လီစ္စထရီကို ခေါ်ယူဖို့ ဥရောပ အသင်းကြီးတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေထဲက ကြိုးစားနေတာပါ။ Goal သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ပယ်လီစ္စထရီကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အသင်းဟာ မန်ယူအသင်း မဟုတ်ခဲ့ပဲ လာလီဂါ အင်အားကြီးအသင်း ဖြစ်တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ကင်းထောက်ဌာနရဲ့ အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကာလာဖက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၉လလုံးလုံးမှာ ပယ်လီစ္စထရီကို ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ပယ်လီစ္စထရီကို ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း တစ်သင်းထဲသာ ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ တောင်အမေရိကသားတွေကို နှစ်သက်တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း ၊ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်အသင်းတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး မန်ယူအသင်းဟာ အဆိုပါ အသင်းတွေကို အသာစီး ရယူကာ ပယ်လီစ္စထရီကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပယ်လီစ္စထရီဟာ ပွဲတစ်ပွဲအတွင်းမှာ လိမ်ခေါက်ဖြတ်ကျော်မှု များစွာကို ပြုလုပ်တတ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လျင်မြန်မှု ၊ တစ်ဦးချင်း ဖြတ်ကျော်မှု ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဟာ အားသာချက်တွေ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ပယ်လီစ္စထရီဟာ တောင်ပံ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် ဖြတ်တင်ဘော ပေးပို့မှုတွေမှာ အားနည်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက် ၁၈နှစ်သာ ရှိသေးတာကြောင့် ပယ်လီစ္စထရီဟာ အနာဂတ်မှာ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အချိန်များစွာ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ညာတောင်ပံ ကစားသမား တစ်ဦး လိုအပ်နေတာကြောင့် ပယ်လီစ္စထရီဟာ တချို့ပွဲစဉ်တွေမှာ မန်ယူအသင်းအတွက် ပါဝင် ကစားပေးနိုင်ချေ ရှိနေပြီး ဥရောပအသင်းကြီး များစွာရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုကို ခံထားရတဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့်တစ်ဦး အနေနဲ့ ဘောလုံးစင်မြင့်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ တောက်ပပြမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။
MySport Myanmar2020-10-06T12:27:41+06:30October 6th, 2020|Football, La Liga, Premier League|